ဆံပင်အရောင်အလန်းတွေမပြောင်းခင် ဒါလေးတွေတော့သေချာပေါက်သိဖို့လို – Trend.com.mm
ခုခေတ်ကလည်းအရင်ခေတ်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။အရင်ကဆိုဆံပင်အရောင်ဆိုးမယ်ဟေ့ဆိုရင် ရွှေရောင်ဆိုးမလား၊အနီရောင်ဆိုးမလား၊crazy color တွေပဲသတ္တိရှိရှိဆိုးချလိုက်မလား။ဒါပဲရွေးစရာရှိတာပါ။ခုခေတ်မှာတော့ Pink Ombre တို့ မီးတောက် color တို့ Taylor Swift Blonde တို့ shades တွေကလည်းများပါဘိခြင်း။အရင်ခေတ်ကလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကိုိယ်ကလည်းကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုယ်ပြော၊အလှပြင်ဆိုင်ကလည်း သူထင်တဲ့အရောင်သူဆိုးပေးလိုက်၊ဟော ..အရောင်ကြီးကရင့်သွားပလား.. “ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင် အရောင်ကပြေသွားမှာညီမလေးရဲ့ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပဲသည်းခံနော်”ဆိုပြီး ပိုက်ဆံလေးအေးအေးလူလူယူပစ်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်လေ.. ခေါင်းလျှော်မှတော့ တော်တန်ရုံအရောင်ကမပြေပဲခံနုိုင်ရိုးလား။ Taylor Swift အကောက်လေးနဲ့အရောင်လေးလိုချင်လို့သွားပါတယ်၊ အဝါရောင်တောက်တောက်ကြီးဆိုးပေးလိုက်ပြီး (ဆေးကုန်သက်သာအောင်)ခပ်တိုတိုညှပ်ပစ်လိုက်လို့ 50 W အား မီိးလုံးကြီးခေါင်းပေါ်တင်ထားတာနဲ့တူသွားတာလည်းရှိရဲ့..ပြောရင်လည်းရန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လား ဒီတော့ အသာလေးပါးစပ်ပိတ်ပြန်လာပြီး အိမ်ရောက်မှ ခေါင်းအုံးလေးကိုက်ပြီးငိုရတာလည်းရှိသပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်ကတော့ အရာရာပြောင်းလဲသွားပြီဆိုသလို တော်တန်ရုံအလှပြင်ဆိုင်တွေကလည်း ခေတ်မီလာပါပြီ။ ဒီတော့ ဆံပင်အရောင်ခပ်လန်းလန်းတွေအလွယ်တကူပြောင်းချင်သူတွေအတွက်လည်းအင်မတန်မှလွယ်ကူလာပြီိပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်အရောင်မဆိုးခင် သေချာပေါက်သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကရှိပါသေးတယ်။အဲဒါတွေကတော့….
သင်ကဆံပင်အရောင်ပြောင်းလိုက်ပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်တို့ ပျော့ဆေးတို့ကိုပုံမှန်သုံးနေကျဟာတွေပဲဆက်သုံးနေမယ်ဆိုရင်သင့်ဆံပင်အရောင်က အလွယ်တကူမှိန်ဖျော့သွားမှာအသေအချာပါပဲ။သင်ဆိုးထားတဲ့အရောင်ကိုအမြဲလိုလိုပံ့ပိုးပေးနေမယ့် Shampoo မျိုးပြောင်းသုံးပေးရမှာပါ။ ပြောချင်တာက ပိုက်ဆံက သင်ထင်ထားတာထက်ပိုကုန်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဆိုးထားတဲ့အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီိး သင့်ဆံပင်ကိုအမြဲတမ်းလှပနေအောင် styling လုပ်ရမှာတွေ၊လိုအပ်ရင် အရောင်ပြန်ချရမှာတွေ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သင့်ဆံပင်က ဘာမှသိပ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့မလိုအပ်ရင်တောင် ပိုက်ဆံလိုချင်တဲ့ အလှပြင်ဆိုင်တွေက ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ တစ်ခုခုတော့အမြဲလုပ်ခိုင်းနေမှာပါ။သင်ကအားနာတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးပါလေရော။ပြောချင်တာက အချိန်လည်းပိုကုန်မှာအမှန်ပါပဲ။
Saloon ကိုသွားရင် သင်လိုိချင်တဲ့ဆံပင်အရောင်အတိအကျကို ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာပြီိးသေချာပေါက်ယူသွားသင့််ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကရှာလိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Taylor Swift အရောင်လေးဆုိုးပေးပါဆိုရင် မီးလုံးကြီးနဲ့တူအောင်အဝါရောင်တောက်တောက်ကြီးဆိုးချလိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ဆိုးတာထက် Highlights ဖောက်တာကပိုကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပါ
ဆံပင်ဆိုးချလိုက်တာထက် Highlights ဖောက်လိုက်တာကပိုကောင်းပါတယ်။သင့်ဆံပင်ကို အရမ်းကြီိးလည်းအရောင်ပြောင်းမသွားစေပဲ ဆံပင်အရင်းတွေရှည်ထွက်လာရင်လည်းရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကြီးဖြစ်မသွားစေပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဆံပင်ဆိုးထားသလိုလည်း ဆံပင်ကိုအချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်နေစရာမလိုတာမို့ အလုပ်များသူတွေအတွက်တော့Highlights ဖောက်တာကသင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ဆိုးပြီးရင်လည်းလျှော်ရမှာပဲဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ ။ဆံပင်ပေါ်မှာကပ်ငြိနေတဲ့ဖုန်တွေအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်မှသာ အရောင်ကဆံသားထဲကိုတိုက်ရိုက်ဝင်နိုင်ပြီး အရောင်လည်းစွဲမှာပါ။မဟုတ်ရင် ဖုန်တွေအညစ်အကြေးတွေကတစ်လွှာခံနေတာကြောင့် ဆေးဆိုးပြီး ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်ကိုိယ်လိုချင်တဲ့အရောင်နဲ့ကွဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးမဆိုးခင် အရင် test လုပ်ပါ
ဆေးဆိုးပေးမယ့်သူကမလုပ်ရင်လည်းကိုိယ်ကလုပ်ပေးဖို့သတိပေးပါ။ အချို့ဆိုးဆေးတွေက Allergic ဖြစ်စေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မတည့်ရင် အရေကြည်ဖုတွေထွက်တာလိုမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပြီးကံဆိုးရင် ဦးနှောက်ကိုပါဒုက္ခပေးနိုင်တာကြောင့် ဆေးမဆိုးခင်ဂုတ်အနောက်ပိုင်းလောက်မှာ ဆေးအနည်းငယ်တင်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက်စောင့်ကာစမ်းကြည့်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဆံပင်အနီရောင်ဆိုးချင်သူတွေကအများကြီးမရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့်် အနီရောင်ဆိုတာက ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ဖိုိ့အခက်ခဲဆုံးအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်ဆိုးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ perfect look ရဖို့အခဲယဉ်းဆုံးအရောင်ဖြစ်သလို မလိုချင်တော့ရင်လည်း ချွတ်ဖို့အခက်ခဲဆုံးအရောင်ဖြစ်တဲ့အပြင် အခန့်မသင့်ရင် ဆိုးပြီးသိပ်မကြာခင်အခြားအရောင်ကိုပြောင်းသွားတတ်တာမျိုးတွေ၊မှိန်သွားတတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတာကြောင့် အနီရောင်ကတော့တတ်နိုင်သမျှလက်ရှောင်သင့်တဲ့အရောင်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ ဆံပင်အရောင်ဆိုးဖို့စဉ်းစားနေသူတွေ ခပ်လန်းလန်းအရောင်လေးတွေပြောင်းချင်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အလှအပအတွက်အရေးကြီိးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချခင်သေချာပေါက်သိသင့်တဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲဆံပင်ဆိုးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် Mention ခေါ်ပြီးသတိပေးလိုက်ပါဦး။ အလှအပဆိုတာအတူမျှဝေခံစားရင်ပိုလှပသတဲ့။
ခုခတကြေလညြးအရငခြတလြေိုမဟုတတြော့ပါဘူး။အရငကြဆိုဆံပငအြရောငဆြိုးမယဟြဆေို့ရငြ ရှရေောငဆြိုးမလား၊အနီရောငဆြိုးမလား၊crazy color တှပေဲသတျတိရှိရှိဆိုးခလွိုကမြလား။ဒါပဲရှေးစရာရှိတာပါ။ခုခတမြှောတော့ Pink Ombre တို့ မီးတောကြ color တို့ Taylor Swift Blonde တို့ shades တှကလေညြးမွားပါဘိခှငြး။အရငခြတကြေလိုရိုးရိုးရှငြးရှငြးနဲ့ ကိုယကြလညြးကိုယဖြှစခြငွတြာကိုယပြှော၊အလှပှငဆြိုငကြလညြး သူထငတြဲ့အရောငသြူဆိုးပေးလိုကြ၊ဟော ..အရောငကြှီးကရငြ့သှားပလား.. “ခေါငြးလွှောလြိုကရြငြ အရောငကြပှသှေားမှာညီမလေးရဲ့ တစပြတနြှစပြတပြဲသညြးခံနြော”ဆိုပှီး ပိုကဆြံလေးအေးအေးလူလူယူပစလြိုကတြာပဲ။ဟုတတြယလြေ.. ခေါငြးလွှောမြှတော့ တောတြနရြုံအရောငကြမပှပေဲခံနုိုငရြိုးလား။ Taylor Swift အကောကလြေးနဲ့အရောငလြေးလိုခငွလြို့သှားပါတယြ၊ အဝါရောငတြောကတြောကကြှီးဆိုးပေးလိုကပြှီး (ဆေးကုနသြကသြာအောငြ)ခပတြိုတိုညှပပြစလြိုကလြို့ 50 W အား မီိးလုံးကှီးခေါငြးပေါတြငထြားတာနဲ့တူသှားတာလညြးရှိရဲ့..ပှောရငလြညြးရနဖြှစရြမှာမဟုတလြား ဒီတော့ အသာလေးပါးစပပြိတပြှနလြာပှီး အိမရြောကမြှ ခေါငြးအုံးလေးကိုကပြှီးငိုရတာလညြးရှိသပေါ့။ ဒါပမယြေ့ ခုခတကြေတော့ အရာရာပှောငြးလဲသှားပှီဆိုသလို တောတြနရြုံအလှပှငဆြိုငတြှကလေညြး ခတမြေီလာပါပှီ။ ဒီတော့ ဆံပငအြရောငခြပလြနြးလနြးတှအလှေယတြကူပှောငြးခငွသြူတှအတှေကလြညြးအငမြတနမြှလှယကြူလာပှီိပေါ့။ ဒါပမယြေ့ ဆံပငအြရောငမြဆိုးခငြ သခွောပေါကသြိထားသငြ့တဲ့အခကွတြှကရှေိပါသေးတယြ။အဲဒါတှကတေော့….
သငကြဆံပငအြရောငပြှောငြးလိုကပြှီး ခေါငြးလွှောရြညတြို့ ပွော့ဆေးတို့ကိုပုံမှနသြုံးနကဟွောတှပေဲဆကသြုံးနမယေဆြိုရငသြငြ့ဆံပငအြရောငကြ အလှယတြကူမှိနဖြွော့သှားမှာအသအခွောပါပဲ။သငဆြိုးထားတဲ့အရောငကြိုအမှဲလိုလိုပံ့ပိုးပေးနမယြေ့ Shampoo မွိုးပှောငြးသုံးပေးရမှာပါ။ ပှောခငွတြာက ပိုကဆြံက သငထြငထြားတာထကပြိုကုနပြါလိမြ့မယြ။
သငဆြိုးထားတဲ့အရောငပြေါမြူတညပြှီိး သငြ့ဆံပငကြိုအမှဲတမြးလှပနအေောငြ styling လုပရြမှာတှေ၊လိုအပရြငြ အရောငပြှနခြရွမှာတှေ ရှုပရြှကခြတနြအေောငလြုပရြပါလိမြ့မယြ။ တကယလြို့သငြ့ဆံပငကြ ဘာမှသိပပြှီးပှငဆြငဖြို့မလိုအပရြငတြောငြ ပိုကဆြံလိုခငွတြဲ့ အလှပှငဆြိုငတြှကေ ဟိုပှောဒီပှောနဲ့ တစခြုခုတော့အမှဲလုပခြိုငြးနမှောပါ။သငကြအားနာတတတြယဆြိုရငတြော့ပှီးပါလရေော။ပှောခငွတြာက အခွိနလြညြးပိုကုနမြှာအမှနပြါပဲ။
Saloon ကိုသှားရငြ သငလြိုခငွတြဲ့ဆံပငအြရောငအြတိအကကွို ဓာတပြုံပဲဖှစဖြှစရြှာပှီိးသခွောပေါကယြူသှားသငြ့ပြါတယြ။ ဖုနြးထဲကရှာလိုကလြညြးဖှစပြါတယြ။ မဟုတရြငတြော့ အပေါမြှာပှောခဲ့တဲ့အတိုငြး Taylor Swift အရောငလြေးဆုိုးပေးပါဆိုရငြ မီးလုံးကှီးနဲ့တူအောငအြဝါရောငတြောကတြောကကြှီးဆိုးခလွိုကတြဲ့အဖှစမြွိုးကှုံရနိုငပြါတယြ။
ဆံပငဆြိုးတာထကြ Highlights ဖောကတြာကပိုကောငြးမှနတြဲ့ရှေးခယွမြှုပါ
ဆံပငဆြိုးခလွိုကတြာထကြ Highlights ဖောကလြိုကတြာကပိုကောငြးပါတယြ။သငြ့ဆံပငကြို အရမြးကှီိးလညြးအရောငပြှောငြးမသှားစပေဲ ဆံပငအြရငြးတှရှညေထြှကလြာရငလြညြးရုပပြကွဆြငြးပကွကြှီးဖှစမြသှားစပေါဘူး။ ဒါ့အပှငဆြံပငဆြိုးထားသလိုလညြး ဆံပငကြိုအခွိနပြှညြ့ဂရုစိုကနြစရောမလိုတာမို့ အလုပမြွားသူတှအတှေကတြော့Highlights ဖောကတြာကသငြ့တောတြဲ့ရှေးခယွမြှုပါပဲ။
ဆိုးပှီးရငလြညြးလွှောရြမှာပဲဆိုတာမွိုးမလုပပြါနဲ့ ။ဆံပငပြေါမြှာကပငြှိနတေဲ့ဖုနတြှအညေစအြကှေးတှကငြေးစငမြှသာ အရောငကြဆံသားထဲကိုတိုကရြိုကဝြငနြိုငပြှီး အရောငလြညြးစှဲမှာပါ။မဟုတရြငြ ဖုနတြှအညေစအြကှေးတှကတေစလြှာခံနတောကှောငြ့ ဆေးဆိုးပှီး ခေါငြးလွှောလြိုကရြငကြိုယလြိုခငွတြဲ့အရောငနြဲ့ကှဲနတောမွိုးတှဖှစေတြတပြါတယြ။
ဆေးမဆိုးခငြ အရငြ test လုပပြါ
ဆေးဆိုးပေးမယြ့သူကမလုပရြငလြညြးကိုယကြလုပပြေးဖို့သတိပေးပါ။ အခွို့ဆိုးဆေးတှကေ Allergic ဖှစစြတောမွိုးတှရှေိပါတယြ။ကိုယနြဲ့မတညြ့ရငြ အရကှညေဖြုတှထှကေတြာလိုမွိုးတှေ ဖှစတြတပြှီးကံဆိုးရငြ ဦးနှောကကြိုပါဒုကျခပေးနိုငတြာကှောငြ့ ဆေးမဆိုးခငဂြုတအြနောကပြိုငြးလောကမြှာ ဆေးအနညြးငယတြငပြှီး ဆယမြိနစလြောကစြောငြ့ကာစမြးကှညြ့တာမွိုးလုပသြငြ့ပါတယြ။
ဆံပငအြနီရောငဆြိုးခငွသြူတှကအေမွားကှီးမရှိပါဘူး။ဒါပမယြေ့ အနီရောငဆြိုတာက ကိုငတြှယထြိနြးခွုပဖြို့အခကခြဲဆုံးအရောငဖြှစပြါတယြ။ အနီရောငဆြိုးမယဆြိုရငြ ကိုယနြဲ့ perfect look ရဖို့အခဲယဉြးဆုံးအရောငဖြှစသြလို မလိုခငွတြော့ရငလြညြး ခွှတဖြို့အခကခြဲဆုံးအရောငဖြှစတြဲ့အပှငြ အခနြ့မသငြ့ရငြ ဆိုးပှီးသိပမြကှာခငအြခှားအရောငကြိုပှောငြးသှားတတတြာမွိုးတှေ၊မှိနသြှားတတတြာမွိုးတှလညြေးရှိတာကှောငြ့ အနီရောငကြတော့တတနြိုငသြမွှလကရြှောငသြငြ့တဲ့အရောငတြှထေဲမှာပါဝငပြါတယြ။
ဒါလေးတှကတေော့ ဆံပငအြရောငဆြိုးဖို့စဉြးစားနသေူတှေ ခပလြနြးလနြးအရောငလြေးတှပှေောငြးခငွသြူတှအနေနေဲ့ ကိုယြ့အလှအပအတှကအြရေးကှီိးတဲ့ဆုံးဖှတခြကွကြိုမခခွငသြခွောပေါကသြိသငြ့တဲ့အခကွလြေးတှဖှစေပြါတယြ။ ကိုယြ့လိုပဲဆံပငဆြိုးဖို့စဉြးစားနတေဲ့သူငယခြငြွးတှရှေိရငြ Mention ခေါပြှီးသတိပေးလိုကပြါဦး။ အလှအပဆိုတာအတူမွှဝခေံစားရငပြိုလှပသတဲ့။